သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်အစွမ်းသတ္တိအကြောင်းကိုတစ်ဦးကမိန်းမငယ် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
အန္န Pelova နှင့်အတူအင်တာဗျူး
ဤပြဿနာ၌ငါလူငယ်ရည်မှန်းချက်ကြီး, အနုပညာနှင့်နောင်လာမည့်မိနစ်အတွင်းအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမိမိကိုယ်ကိုနှင့်သူမ၏ကမ္ဘာကြီးကိုရှုမြင်အကြောင်းကိုနည်းနည်းပို share ကြလိမ့်မည်သည့်စွန့်စားသူတစ်ဦးအားဖြင့်သင်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်းကိုသင်အန်နာ Pelova တွေ့ရမယ်။
အန္နမင်္ဂလာပါ! စောပိုငျးကာလတစ်နည်းနည်းနှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြစို့ - သငျကို Creative Advertising ကြော်ငြာမဟာဗျူဟာကိုလေ့လာရှိရာအင်္ဂလန်အတွက်သင့်ရဲ့ပညာရေးကိုဆက်လက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို - ယခုအချိန်တွင်မှသင်၏အနာဂတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်း၏ညှနျကွားပုံသဏ္ဍာန်ယူလာတယ်။ ဘယ်လိုဤတိုင်းပြည်နှင့်ရှိသင့်အသက်တာကိုသင်သြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့တာလဲ
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကိုသွားကငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုံးဝအလိုအလျောက်နဲ့အလျင်စလိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလန်ဒန်အကြောင်းအများကြီးကိုသိ didn`t နဲ့ကျွန်မပင် didn`t ဒါကြောင့်ဓါတ်ပုံတွေအပေါ်တစ်ခုအတွက်မည်သို့စစ်ဆေးရန်, Google ဖွင့်လှစ်။ ငါအဲဒါကိုအကြောင်းကိုစိတ်ကူးရုံသို့သွားနှင့်ထိုမြို့၌ငါ၏အစိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်တွေ့ဆုံလျှင်ကြည့်ဖို့ပျော်စရာပါလိမ့်မယ်ထင်။ တစ်ကြော့မော့ကိုချုံ့, စတိုင်နှင့်စံပြမြို့ - ။ ငါလန်ဒန်ငါမျှော်လင့်ထားသောအရာကိုအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောခဲ့တဲ့ငါအတွက် Stuff ချင်သောအရာကိုအိပ်မက်ကနောက်ဆုံးမိနစ်သည်အထိမသိဘဲနေတဲ့ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာနှင့်အတူတစ်ဦးတည်း, 18 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ တူအဘယ်အရာကိုမျှ, ငါ့အိပ်ဆောင်အဲဒီအခြိနျမှာအမြားဆုံးအမြင်အာရုံမနှစ်မြို့ဖွယ်ရပ်ကွက်တဆင် & Castle မှာကြောင်းထွက်လှည့်။ ငါသည်ငါ့အခန်းထဲရှိမြေပြင်ပေါ်တွင်ငါ၏အခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာတင်ကျယ်ပြန့်သည်ငါ့လက်မောင်းပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ငါနီးပါးနံရံထိခဲ့သည်။ နေ့ရက် Claustrophobia, ပြင်းထန်ယဉ်ကျေးမှုထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ရေတွက်ငါသွားခဲ့ပါသည်သည်အထိ ဘူလ်ဂေးရီးယားမှပြန်လာ။ ဒါကလာမည့် 2-3 နှစ်ပေါင်း၌ငါ့ကိုမျှော်လင့်ခဲ့ရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်နုတ်ထွက် didn`t ။ ငါကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများဖို့အသုံးပြုတယ်နဲ့ကျွန်မအနည်းငယ်ပိုပုံမှန်အရွယ်အစားနှင့်စျေးနှုန်းနှင့်အတူအခန်းတခန်းကိုတွေ့, ငါ၏ပညာရေးပြီးဆုံး။
ဒါဟာအတော်လေးနာကျင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းငါ့ကန့်သတ်ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်း reprogrammed ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအလွန်တန်ဖိုးရှိသောအဖြစ်ဤအတွေ့အကြုံကိုစဉ်းစား, ငါ့အမျိုးသားရေးမာနထောင်လွှားခြင်းဖြင့်ငါ့အားချမှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းစိတ်လူတစ်ဦးထဲသို့အကြှနျုပျကိုလှည့်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့, လူတွေအကြားခြားနားချက်များနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲငါ့ကိုတွန်းငါ့ကိုလွတ်လပ်သော လုပ်. ငါ့ကိုရဲစွမ်းသတ္တိကိုပေးတော်မူ၏။ ဒါဟာငါမဆိုအခွအေနေကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုငါ့အားပြ။ ငါကြောင့်လိုအပ်စဉ်းစားနဲ့ကျွန်မဆက်ဆက်ထို့နောက်ငါဆင်ကန်းတောတိုးကံကြမ္မာယုံကြည်စိတ်ချကျန်ကြွင်းသောအပြန်နောင်တရ don`t ။
အကြမ်းအားဖြင့်အဲဒီအချိန်က, သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးက်ဘ်ဆိုက်စတင်ပါ - သင်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၏လယ်ပြင်၌သင်တို့၏အောင်မြင်သောစီမံကိန်းများကိုတင်ပြဘယ်မှာအစုစု။ ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့သောအရာတို့ကိုအမှန်တကယ်ပြန်ထို့နောက်သင်တို့အဘို့အထွက်လှည့်ခဲ့တာလဲ
ငါ 16 နှစ်အရွယ်မှာကတည်းကငါတကယ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီခဲ့သူကိုလူကောင်းတွေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မတစ်ဦးအလားအလာရှိသည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ site ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ငါ့ကိုငှါး၏။ ထိုကာလအတောအတွင်းငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အားဖြင့်သင်ယူခြင်းခဲ့သည် Photoshop ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဖို့ဘယ်လို။ သူတို့ကငါ့ကိုမပြောင်းရွှေ့ချင်ခဲ့တယ် Plovdiv ငါ့အကျောင်းဆင်းပွဲပြီးဒီဇိုင်နာအဖြစ်သူတို့အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့။ သို့သော်လည်းငါသည်နေဆဲလန်ဒန်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။
ဒါဟာသတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေများကသူတို့ကိုငါတစ်ခုခုဆွဲနိုင်လျှင်သူတို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များတစ်ခုသို့မဟုတ်လိုဂိုဖြစ်စေ, ငါ့ကိုမေးရန်စတင်ခဲ့ကြောင်း, ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဤသည်ငါ့ကိုငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ကြိုးစားရန်ယုံကြည်မှုကိုပေး၏။ ငါ website တစ်ခု, တစ်ဦးလိုဂို, စီးပွားရေးကတ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါလန်ဒန်မြို့တွင်အလားအလာဖောက်သည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတည်းဟူသောငါ၏ငှားပေးဆောင်ရသောတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့အလုံအလောက်ကောင်းသောအထဲကအလုပ်လုပ် wasn`t ။ ငါအလုံအလောက်လူမှုရေးအဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြော်ငြာရန်မည်သို့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အယူအဆရှိ didn`t သာအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလကနေလန်ဒန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ဤစိတ်ကူးကိုတက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ အနည်းဆုံးငါသည်လည်းတန်ဖိုးရှိသောအရာ, စီးပွားရေးလုပ်ဖို့မဘယ်လိုထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအတောအတွင်းငါကောင်းတစ်ဦးက start ခဲ့သည့်ကြော်ငြာလေ့လာခဲ့သည်။
ငါပြန်ရောက်ပြီဟုမဆိုနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတို့ကကိုယျ့ကိုယျကိုကိုဝေ shouldn`t ရာ၌ငါလွတ်လပ်ခွင့်ကိုခစျြနဲ့ကျွန်မကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသား၌၎င်း, တစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ယုံကြည်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်ငါ့အသက်ကိုငါနီးပါးတိုင်းနိုင်ငံကနေအလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း, ဒါကြောင့်စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားဒစ်ဂျစ်တယ်ဒျန်များအတွက်အံ့သြစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အလွတ်များနှင့်စျေးနှုန်းများကိုဤနေရာတွင်အောက်ပိုင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်များကိုတည်ဆောက်ရန်စတင်နေသောလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာနက်ကအမြန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထိုကဲ့သို့သော startup မှာအနည်းဆုံးအဆက်အသွယ်တည်ဆောက်ရန်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုနဲ့နာမည်တစ်ခုကြာ, ငါလန်ဒန်မှာတည်းခိုခဲ့လျှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါယခုရှိသည်သောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမတတ်နိုင်နိုင်တော့မည် wouldn`t ။ ထိုမှတပါးဤအရပ်၌ငါ့အမိဘများနှင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။
သင်သည်အဘယ်သို့နိုင်ငံရေးတိုင်းပြည်၏အသက်နှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်မှာတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးပါတီ၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာပေ join လုပ်? အဘယ်ကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ရုတ်သိမ်းခဲ့တာလဲ
ဘူလ်ဂေးရီးယား "နိုင်ငံရေး" ၌များစွာသောလူများအတွက်ညစ်ပတ်စကားလုံးဖြစ်ပါသည် - ငါမရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ ငါမကြိုက်ဘူးငါပိုကောင်းများအတွက်ပြောင်းလဲရန်နှင့်ငါ့နောက်သို့လိုက်ရန်လုံလောက်သောလူတွေလာအောင်နှိုးဆွဖို့ငါ့တန်ခိုးအတွက်အရာရာလုပ်ပေးတစ်ခုခုရှိကိုအောက်ပါအတိုင်းသို့သော်လည်းငါသည်နိုင်ငံရေးကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်လာခဲ့သည်ပင်ရှေ့တော်၌နိုင်ငံရေးသမားပေါ့။ ငါ 11th တန်းစဉ်အခါကအားလုံးကိုငါဘွဲ့ရမတိုင်မီတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများ၏အဓိကမျက်နှာကြီးစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသူသည်ငါလုပ်နေတာဘာနဲ့တူ didn`t ဘယ်လောက်ငါ့ကိုရှင်းပြရန်နှင့်သူဘယ်လိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြလိမ့်မည်နိုင်ရန်အတွက်ငါ့ကိုအင်တာဗျူးခေါ်ဆောင်သွား hadn`t နှင့်ငါ့ High-ကျောင်းရဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ဦးခြိမ်းခြောက်အစည်းအဝေးငါ့ကိုဆင့်ခေါ်တော်မူကြောင်းကိုသိသာထင်ရှားသောမီဒီယာရှိပါတယ် wasn`ta ငါ၏အဒီပလိုမာ, ဒါပေမယ့် unwillingly ။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်ကျနော်တို့အကြောင်းမရှိများအတွက်အများဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့သူကိုအတူကလူအချို့ကိုငါ့ရန်သူနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ငါ့ကိုအပြစ်တင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုကျော်လောင်းအတော်လေးထိုးစစ်စကားလုံးများနှင့်ကျူးကျော်ရှိခဲ့သည်။ တာဝနျ: ထိုအခါငါစကားလုံးက "ခေါင်းဆောင်" ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ပြည်သူ့သင်အောင်မြင်တဲ့အခါသင်ကျေးဇူးတင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ, သင်မူကားကျရှုံးရသောအခါဧကန်အမှန်အဆိတျကှယျသငျသညျဆုတ်ဖဲ့မည်။ ထိုအသင်ဤများအတွက်တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ရွံမုန်းဖွယ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ခြင်းနှင့်သငျသညျကိုဆင်းငြိမ်သက်ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မရှိစေရေးအတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုယူသှားသောသူတို့အား - ထိုအခါသင်သည်လည်းသင်၏အစစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့နေသောနားလည်သဘောပေါက်။
ငါမောင်းထုတ်ရန်ကိုချစ်, ငါ၏အသက်တာ၏ကားထဲတွင်ခရီးသည်တင်ဖြစ်ဖို့မ - ကိုယ့်ရပ်နေနှင့်စောင့်ကြည့်သူတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ဖူးဘူး။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့၌ငါ့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကာလအတွင်းကျွန်မဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ယှေလကျောက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ယူဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကူညီပေးနေခဲ့သည်။ ဤနည်းကိုငါ "ဂရင်း" နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထိုကာလအခါငါသည်လည်းကျောဘူလ်ဂေးရီးယားသို့ရောက်ကြ၏။ ငါတက်ကြွခဲ့မကြာခင်သူတို့မဲပေးနှင့်အမျိုးသားကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ငါ့ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ငါသည်ပါတီများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်ကူးများပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်နဲ့ကျွန်မအချို့သောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူကူညီခြင်းခံခဲ့ရသည်, 2013 အတွက်အမျိုးသားရေးရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့။
ငါ Co-ကုလားထိုင်အဘို့ကို run ချင်တယ်ဆိုရင်ငါ့အလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏တဦးတည်းအပြီးတစ်နှစ်ငါ့ကိုမေးတယ်။ အဆိုပါဂရင်းအတွက် Co-ဥက္ကဌအတွင်းကျားမတန်းတူရေးအဲဒီမှာသူဖြစ်ရမည်တစ်ခုထုတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းလည်းမရှိ။ အဲဒီအခြိနျမှာ Co-ကုလားထိုင်သူထိုမိန်းမသည်ဆုတ်ခွာခဲ့သည်။ ငါအမည်စာရင်းတင်သွင်းငြင်းဆန်ပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောအဆိုပြုချက်ပိုပြီးအဖွဲ့ဝင်များကနေလာမယ့်စတင်ခဲ့နဲ့ကျွန်မဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့သည်ငါ့ယုံကြည်စိတ်ချကြောင့်လကျခံဖို့ကအနည်းဆုံးညာဘက်ပါလိမ့်မယ်ငါ့ကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းချင်ကတည်းကကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါအများစုငါ့ကိုရွေးကောက် wouldn`t သေချာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကကျွန်မဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများ၏အငယ်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာသည်နှင့်ဖြစ်ကောင်းဥရောပမှာဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်သာအမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီနှင့်ပွင့်လင်းစိတ်ပါတီအတွင်းဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။
ငါသည်ပါတီများ၏ပြည်တွင်းရေးအဖွဲ့အစည်းအပေါ်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရာစဉ်အတွင်းနီးပါးတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်, အသုံးပြုခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာနောက်တဖန် run ဖို့အဆိုပြုချက်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ငါငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဤသူသည်ငါတက်ပေးပြီဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လတံ့, ဒါပေမယ့်အချိန်ပေါ်စွန့်ခွာဖို့မသာနိုင်ပါလိမ့်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ငါသည်အခြားသမ္မတလောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းပေးရန်နှင့်လည်းအများပြည်သူဘဝကနေချိုးယူချင်တယ်။ နိုင်ငံရေးအထူးသဖြင့်နှစ်လယ်ပိုင်း 20s အတွက်တစ်စုံတစ်ဦးသည်, တစ်ဦးခက်ခဲတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါသုံးတိုက်ကြီးပေါ်လေးနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ငါယခုတိုင်အောင်အများကြီးပိုပြီးသွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ ငါရပ်တန့်ရန်ရည်ရွယ် don`t ။ "ကျွန်မအခုပိုက်ဆံမရှိပါဘူး" ကဲ့သို့အတားအဆီးပဲဆင်ခြေများမှာ - တဦးတည်းကအမြဲတမ်းသွားလာရန်လမ်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, က hitchhiking ရင်တောင်။ အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးတိုင်းပြည်သည်ဤယဉ်ကျေးမှုအဘို့အကြှနျုပျ၏စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာနေနှင့်ကျွန်မအဲဒီမှာရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲကြောင်းကအရမ်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်, ဂျပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါနောက်တစ်, သန့်စင်ဂြိုဟ်သို့ကျဆင်းသွားခဲ့လျှင်သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ငါအရာအားလုံးကိုတခြားသူတွေကိုအသေးစိတျနဲ့ရိုသေလေးစားမှုမှအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူပြုဆိုတဲ့အချက်ကိုကြိုက်တယ်။ ချဉ်ချယ်ရီပင်တို့၏အပွင့်တစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အလှအပပဲတန်ဖိုးထားရပါမည်။
သင်ကစာအုပ်၏ပူးတွဲရေးသားသူ "များမှာဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကျေးရွာပေါင်း"။ အဘယ်အရာကိုစာအရေးအသားမှအစကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့တိုက်တွန်းဖြစ်ပေါ်?
ငါအကြောင်းမရှိငါ့ကိုလည်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖို့တစ်ခုခုနှင့်အတူပါဝင်ကူညီရန်အဘို့အတစ်လမ်းအတိုင်းဤစာအုပ်၌ငါ့ပါဝင်မှုကိုယူ။ ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအတွက်ခရီးသွားသတင်းစာပညာနေဆဲအလွန်လူကြိုက်များသည်မဟုတ်, ကကြီးမြတ်အရေးပါမှုသည်။ ဒါဟာကျေးရွာပေါင်း depopulated သောအနုတ်လက္ခဏာစာရင်းဇယားကိုအာရုံစိုက်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဘူလ်ဂေးရီးယားကျေးလက်ဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်များအတွက်ကြီးမားသောအလားအလာအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဆွေးနွေးချက်ရှိသေး၏။
ဘူဂေးရီးယားအတွက်ဝတ္ထုနှင့်သင်သိသိသာသာအောင်မြင်မှုလည်းရရှိခဲ့ကြဘယ်မှာစာရေးဆရာများများအတွက်တီဗီအဖြစ်မှန်အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက် - Next ကို "လက်ဖက်" ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုနှင့်၎င်း၏ဖန်တီးမှုပတ်လည်ခြေလှမ်းများနှင့် ပတ်သက်. ပြုလုပ်ရေးသားဖို့သငျသညျမှုတ်သွင်းအဘယ်သို့သောအကြောင်းကိုစာအုပ်အကြောင်းကိုပိုမိုပြောပြပါ။
"လက်ဖက်" ငါ့ပထမဦးဆုံးဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ ငါရှိသောကြောင့် 2014 အတွက်နယူးဘူဂေးရီးယားဝတ္ထုများအတွက် CIELA`s အမည်မသိယှဉ်ပြိုင်မှုကရေးသားဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ငါအနိုင်ရချင်ခဲ့တယ်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူကရေးသားခဲ့သည်များနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခံရဖို့, ဒါပေမယ့်ငါရေးလိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားခဲ့ရလို့ပဲ။ သူတို့ကိုငါစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ဘဝကိုပေး၏သည်အထိဤမျှလောက်များစွာသောဖှယျခရီးစဉ်များနှင့်အစည်းအဝေးများပြီးနောက်, ငါပုံပြင်တွေကိုချွတ်လှုပ် couldn`t ။ ၏သင်တန်း, များစွာသောခရီးစဉျတ္ထုထဲမှာရှိပါတယ်, ငါကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ပတ်သက်. ပုံပြင်များကိုပြောပြပေမယ့်သူကသင်ကိုယ်တိုင်နဲ့တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုသိရန်လာပြီအကြောင်းကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ယှဉ်ပြိုင်မှာထိပ်တန်း 10 အတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်သောအခါငါအံ့သြသွားတယ် - ဤအမှုသည်ငါ့အဘို့ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုကြီးက 400 သည်အခြားဝတ္ထုကျော်နှင့်အတူဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ထားပါတယ်ကတည်းက။
နောက်ပိုင်းပေါ်ငါသည်လည်းတီဗီအဖြစ်မှန်ငါအများကြီးအသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးလုပ်ဘယ်မှာ "ဒီစာမူ" အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ငါထုတ်ဝေသူမှစာအုပ်ပို့ခင်ငါတည်းဖြတ်ရေးတွေအများကြီးဘာလုပ်သင့်ပေမယ့်ငါမကြာမီနေ့၏အလင်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် "လက်ဖက်ရည်အရွက်" ကယုံကြည်ကြသည်။ ငါတောင်မှ English သို့ကြောင့်ဘာသာပြန်ဆိုရန်အစီအစဉ်များရှိသည်။
သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးအဓိကစီမံကိန်းများကိုတစ်ခုမှာဝက်ဘ်ဆိုက်ဂရိတ်ခြေသလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်၎င်း၏စိတ်ကူးနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တင်ပြပါ့ ??
ဂရိတ်ခြေသလုံး ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့လူမှုရေးပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်ရုံးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သို့မဟုတ်9မှ5ကနေအလုပ်လုပ်နေမှတက်ချည်ထားမဟုတ်ကြောင်းဘဝတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလမ်း၏စိတ်ကူးမြှင့်တင်ရန်ရည်မှန်းချက်အဖြစ်ရှိပါတယ်။ စစ်မှန်သောဒျန်အားလပ်ရက်အပေါ်မလိုက်မသွားဘူး - သူတို့ကဒီလမ်းနေထိုင်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်းငယ်ရွယ်သူတစ်ဦးဟာယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံထားသောစံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်ပင်မိတ်ဆွေများထံမှဖိအားအများကြီးအောက် - ကောင်းတစ်ဦးပညာရေးရလက်ထပ်ရန်, သားသမီးဖန်တီးသူ / သူမ၏ဘဝတစျခုလုံးအလုပ်လုပ်ရန်, အနားယူစေခြင်းငှါ, တနင်္ဂနွေအသက်ရှင်ဖို့နဲ့ ထို့နောက်သွားလာ perchance ။
အဲဒီမှာငါကဲ့သို့သောလူများစွာဖြစ်ကြပြီးဂရိတ်ခြေသလုံးသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ငါ့ကိုလည်းကူညီပေးသည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏဘဝအကြောင်းကိုအကြံပြုခြင်းသည်ငါ့ကိုမေးခြင်းငါ့ကိုစာရေးပါ။ ငါက၎င်း၏အတိအကျရည်ရွယ်ချက်တွေ့ရှိခဲ့တိုင်အောင်နှစ်ပေါင်းများစွာငါ့ကိုယူကယ့်ကိုသစ်ကို isn`t, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ငါဇန်နဝါရီလအတွင်းကပြန်လည်စတင်ရန့်တစ်လငါတစ်နည်းနည်းနဲ့ 30,000 လူများကသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ အခုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်မှာငါပင်စီမံကိန်းအတွက်ရန်ပုံငွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ငါအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိနှင့်ငါကလုပ်ဖို့ကိုဆက်လက်ချင်တယ်။
သငျသညျယခုအချိန်တွင်တခြားဘာဥစ္စာ၏အတွေးအခေါ်များ actualize သလဲ?
ငါအမေရိကန်နှင့်ဥရောပမဂ္ဂဇင်းများနှင့် websites များအတွက်ရေးလိုက် - ခရီးသွား, လေးနက်ဆောင်းပါးများ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ယူဆပေမယ့်အများအားဖြင့်အီးမေးလ်များ။ ငါသည်ဤငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်, မတူကွဲပြားလူမျိုးများအနေဖြင့်လူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုချစ်။
တစ်ခုခုသင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပေါ်ရွှေ့ဖို့သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒနောက်ကျောဆောင်တတ်၏ demotivated သည့်အခါမဆိုအချိန်လေးရှိခဲ့သလော
ငါ demotivated အကြိမ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ကြပါပြီ။ ငါသည်ဤတစ်အတော်လေးသာမန်လူ့ခွအေနအေဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မဘာမှအဘို့အလုံလောက်အောင်မကောငျးဖွစျနဲ့ကျွန်မအောင်မြင်မနိုင်ကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်စတင်သောအခါငါအချိန်လေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအသစ်ကတစ်ခုခု start တဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်မကြာခဏတွေ့ကြုံတတ်၏။ ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခါတလေကျွန်မရဲ့အရင်းနှီးဆုံးလူများ၏ကိုယ်ကျင့်တရားထောက်ခံမှုရှာကြာလော့။
အဆိုပါ demotivation အမှန်တကယ်ငါ့ကိုလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါတယ်။ ငါထွက်မယ့်လမ်းကိုတွေ့မြင် don`t အခါ, ငါပဲခက်ခဲသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်ကိုငါသိ၏။
ငါ့ကိုငါလိုချင်တာတွေဆုံးဖြတ်ငါကျော်လွန်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲလုပ်, အိပ်မက်မက်ကြပါဘူး။ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း၏စာဖတ်သူများငါယုံကြည်ခြင်းနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုအလိုရှိ၏။ ငါဘူလ်ဂေးရီးယားရှိလူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုပြီးဒီမှာနည်းနည်းနေသောအခက်အခဲများ၏သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်ရန်နှင့်ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုလိုက်ချင်တယ်။ကျနော်တို့ကအကြောင်းပြချက်ကဒီမှာမွေးခက်ခဲတဲ့အချိန်လေးအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်နေကြသည်။ သူတို့ကအသက်တာ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများဖြစ်ကြပြီးကျေးဇူးတင်စကားသူတို့ကိုကျနော်တို့ကိုတက်မပေါက်ပါဘူး။
အန္န Pelova အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
Facebook ပေါ်မှာက Anna Pelova
'' မဟာခြေသလုံး '' Read
ဘလော့ဂ်, စာအုပ်, ခရီးသွား | | rating:5/ 30